निर्वाचन आयोग ‘अपवित्र सेटिङ’ मा त छैन ? « Janata Samachar
निर्वाचन आयोग ‘अपवित्र सेटिङ’ मा त छैन ?
काठमाडौं । संसदको असंवैधानिक विघटनपछि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा बढी अग्रसर बनेको तर नेकपाको विवाद निरुपणमा ध्यानै नदिएको निर्वाचन आयोगको अकर्मन्यतामाथि पछिल्लो समय सर्वत्र चासो बढेको छ । नेकपा अनौपचारिक विभाजन भएको र आधिकारिकताको लडाइँ शुरु भएको ७० दिन बित्दासमेत आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसकेर आफ्नो अकर्मन्यता पुष्टि गरिरहेकाे हाे ।
खासगरी असंवैधानिक कदम चालेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने वर्तमान सरकारसँग निर्वाचन आयोगको साँठगाँठ भएकै कारण नेकपा विवाद समाधानमा ध्यान नदिएको आयोगलाई आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त पार्टी विवाद टुंग्याउन रुचि नदेखाउने आयोगले नहुने चुनाव गर्ने भन्दै राज्यको ढुकुटिबाट १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोबाट पनि यो ‘अपवित्र साँठगाँठ’ लाई राम्ररी पुष्टि पनि गर्छ । संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु र त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा वितरण गर्नुले आयोग र आयोगका पदाधिकारीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ ।
खासगरी असंवैधानिक कदम चालेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने वर्तमान सरकारसँग निर्वाचन आयोगको साँठगाँठ भएकै कारण नेकपा विवाद समाधानमा ध्यान नदिएको आयोगलाई आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसो त पार्टी विवाद टुंग्याउन रुचि नदेखाउने आयोगले नहुने चुनाव गर्ने भन्दै राज्यको ढुकुटिबाट १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोबाट पनि यो ‘अपवित्र साँठगाँठ’ लाई राम्ररी पुष्टि पनि गर्छ ।
स्मरण रहोस्, संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई तयारी निर्वाचनकाे थाल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च गरेको आयोगका एक पदाधिकारी बताउँछन् । यसरी संसदमा मुद्दा बहसका क्रममा रहेको बेला टुंगो नलागेको निर्वाचनका लागि आयोगले किन तयारी थाल्यो ? र किन यत्रो धनराशी उडायो ? भन्ने प्रश्न जति गम्भीर छ, त्यो भन्दा पनि धेरै यो गर्नमा आयोग कसैकाे सेटिङमा काम गरिरहेको त छैन ? भन्ने सवाल बढी महत्वपूर्ण छ । प्रश्न स्वभाविक उठ्छ, के मुलुकको स्वायत्त संवैधानिक अंगले यसरी हचुवाको भरमा अघि बढ्न मिल्छ ?
आयोगका ति पदाधिकारीका अनुसार आयोगले यसबीचमा ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको, निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको र मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ । तर अब चुनाव घोषित मितीमा हुनेवाला छैन । त्यसो हो भने आयोगले यो कति नैतिक काम गर्यो ? र कसले दिन्छ यसकाे जवाफ ?
संसदमा मुद्दा बहसका क्रममा रहेको बेला टुंगो नलागेको निर्वाचनका लागि आयोगले किन तयारी थाल्यो ? र किन यत्रो धनराशी उडायो ? भन्ने प्रश्न जति गम्भीर छ, त्यो भन्दा पनि धेरै यो गर्नमा आयोग कसैकाे सेटिङमा काम गरिरहेको त छैन ? भन्ने सवाल बढी महत्वपूर्ण छ । प्रश्न स्वभाविक उठ्छ, के मुलुकको स्वायत्त संवैधानिक अंगले यसरी हचुवाको भरमा अघि बढ्न मिल्छ ?
निर्णय क्षमताको अभाव
पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पछिल्लो समय उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न नसक्नुका पछाडि आयोगको निर्णय क्षमता मुख्य कारक रहेको बताउनुहुन्छ । आयोगको निर्णय क्षमतामा देखिएको अभावले यसको स्वायत्तता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको भए पनि अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ ’ पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘के कारणले आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट छैन । यो भनेको आयोगका लागि आममानिसमा परेको राम्रो छाप होइन । आयोगले जे गर्नुपर्ने छ कानुनी रूपमा गरे हुन्छ ?’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई छोपेर राखेको बताउनुभएको छ । नेकपाको घाउलाई निर्वाचन आयोगले छोपेर राखेको छ, जुन क्यान्सरजस्तो भइसकेको छ’ उप्रेतीको तर्क छ ।
आयोग र मुलुकका लागि नेकपाको विवाद निकै जटिल देखिरहेको विश्लेषण गर्दै उप्रेती विवादको कानुनी निरुपण हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनु हुन्छ । ‘निर्वाचन आयोगबाट गरिएन वा गर्न सकिएन, तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार समय बितेकाे छ । त्यतिवेला आयोग निर्वाचनको तयारीमा लाग्यो, तर दलको विवाद समाधानमा लागेन ’ उप्रेती भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारण मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै समस्या आउने देखिएकाे छ । जाे मुलुककै लागि हानिकारक हुन सक्छ ।’
यसरी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको बुझाई जस्तै आयोगले नेकपा विवादबारे कानुनी रुपमा जटिलता फुकाउन खोज्नुको सट्टा झन/झन समय लम्ब्याइरहेको छ । के नेकपा विवाद टुंगो नलगाउँदासम्म मुलुकको राजनीतिले गति नलिने निर्वाचन आयोगलाई थाह छैन ? आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत अनुसार जारी विवाद टुंग्याएर राजनीति अघि बढ्न सहयोग गर्नु पर्ने होइन र ? कि त फेरि पनि आयोग केही अरु सोचिरहेको छ ? र अझ गम्भीर प्रश्न यो उठेको छ कि, आयोग कतै पहिले नहुने निर्वाचनमा हौसिएजस्तै कुनै ‘अपवित्र सेटिङ’ मा त छैन ?